ढल्किँदो साँझमा गर्माएको नाचघर
काठमाडौं/पहिचान – ढल्किँदो साँझ, त्यसमा पनि मध्य पुसको काठमाडौं । मंगलबार पनि चिसो उस्तै थियो । तर, नाचघर वरपरको मौसम भने गर्माइरहेको थियो । पुसको चिसो सिरेटोमा वान पिसमा हिँड्नेहरुको संख्या बाक्लिरहेको थियो । पैदल यात्रु हुन् या गाडीको झ्यालबाट देखिने यात्रु, अधिकांशले चिसो चिर्न न्यानो कपडाले आफूलाई बेरिरहेका थिए । तर, त्यही अस्ताउँदो सूर्यमा वान पिसमा ठाँटिएकाहरु नाचघरको प्रवेशद्वारबाट भित्र छिरिहेका थिए ।
नाचघरको कार्यक्रम हल पुग्दा स्टेज रङ्गीन थियो । स्टेजको ब्यानरमा लेखिएको थियो, ‘समानता हाम्रो प्राथमिकता’ ।
भैरव काली डान्समार्फत कार्यक्रमको सुरुआत भयो । नाजियाले नाचिन् । दर्शक दीर्घाबाट चर्को हुटिङ आइहरहेको थियो । उद्घोषिकाले उद्घोष गरिन्– १६ जना प्रतिस्पर्धी एकपछि अर्को गर्दै चमकदमकपूर्ण स्टेजमा निस्किन थाले । हुटिङको भोलुम बढ्यो ।
‘ब्युटी प्याजेन्ट’ रहेछ । शरीर र मष्तिकको परीक्षण चलिरहेको थियो ।
१६ बाट उत्कृष्ट १० जना छानिए । छान्ने निर्णायकको कुर्सीमा थिए– सञ्चारकर्मी तथा निर्देशक लुनिभा तुलाधर, मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ, डा. निर्माण थापा, मोडल दीपक घिमिरे र नायिका कमली वाइवा ।
१० बाट ५ जना छानिए । उत्कृष्ट ५ लाई मुख्य निर्णायक कपिल श्रेष्ठले प्रश्न सोधे, समानताका लागि कसकसले केके गर्नुपर्छ ?
प्रतियोगीलाई ३ मिनेटको समय थियो । उनीहरुले आफ्नो जवाफ सुनाए । बीचबीचमा हिन्दी, नेपाली, भोजपुरी गीतमा डान्स भैरहेको थियो ।
पर्खाइ अन्तिम निर्णयको थियो । उद्घोषिकाले निर्णय सुनाइन् । सेकेन्ड रनरअप पाटनका अनुज पिटर राई । माहोल तातिँदै थियो । उनले घोषणा गरिन्, फस्ट रनरअप । फष्ट रनरअप भए धनगढीका वीरेन्द्र चौधरी । उनीहरुले क्रमशः ३० र ४० हजार रुपैयाँ हात पारे ।
१५ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै सर्लाहीका मनिल चौधरी ‘मिष्टर गे ह्यान्डसम–२०१७’ घोषित भए । उनले टाइटलसँगै नगद ५० हजार हात पारे ।
मनिलले निर्णायकको प्रश्नको जवाफमा लेखेका थिए, “म एक समलिंगी पुरुष हुँ । त्यसैले समानताको कुरा गर्दा पहिला संविधानले अधिकार दिन थालिसकेको यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समलिंगी विवाहको मान्यता दिनुपर्छ । शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याएर जनचेतना जगाउनुपर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई आफ्नो मुद्दाबारे हामी आफैंले बुझाउनुपर्छ र उनीहरुको सहयोग लिनुपर्छ । त्यो भन्दा पनि पहिला हामी आफैं खुल्नुपर्छ, समाजलाई आफ्नो यौनिकताबारे बताउनुपर्छ ।”
नेपाली समाज विस्तारै ‘ओपन’ हुँदै गएको उक्त प्रतियोगिताले सन्देश दिइरहेको थियो । नारी र पुरुषमात्रै हुन्छन् भन्ने समाजमा ‘गे ह्यान्डसम प्रतियोगिता हुनु आफंैमा ठूलो सन्देश थियो । जाडोमा आफ्नो स्पष्ट परिचय झल्काउँदै ‘वान पिस’ मा हिँडिरहेका तेस्रोलिंगीहरुले आफ्नो जाडोको ठिही मात्रै चिरिरहेका थिएनन्, आफ्नो महिला र पुरुष मात्रै हुन्छन् भन्ने सोच पनि चिरिरहेका प्रतीत हुन्थ्यो ।